Barnaamijka dokumentriga P1 ee "Min Flykt" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sîlan Diljen iyo labadeeda gabdhood oo dib ugu laabtey waddadii ey soo martay 30 sannadood ka hor. Sawirle: Sîlan Diljen/Sveriges Radio.
Barnaamijka dokumentriga P1 ee "Min Flykt"
La daabacay fredag 15 november 2013 kl 13.26
Sîlan oo afar jir ah iyo hooyadeed ayaa ka soo qaxey carriga Kusdistaan ee dhaca koonfurta bari ee dalka Turkiga, muddo iminka 30 sannadood ey ka soo wareegtay. Sîlan oo hooyadeed gacanta haysata ayaa soo dhex maquurey siligga xuduudda iyada oo ey habeen ahayd, isla-markaana uu dhulku miineeysnaa.
Sîlan, hooyadeed iyo gabar yar oo afar jir ah oo ey Sîlan dhashay waxey dib ugu laabteen dhabbadii ey soo mareen muddo 30 sannadood iminka laga joogo. Waana halka uu ka dhashay barnaamijka dokumentaarka (xusuusta) ee loogu magac-darey ”Min flykt – qaxeeygii”.
Barnaamijka xusuusta ee "Qaxeeygii" ayaa ku saleey-san halgankii Kurdida, xusuusta shakhsigu jeclaan lahaa inuu bulshada, dhallaankiisa uga warrammo, hase yeeshee aanu fikirkaasi ku ekeeyn oo keliya intaa…
- Muddadii aan hoowsha ku guda jirney waxaan ogaaney iney jiraan dadyoow badan oo soo marey, hayana sheekooyin kala duwan oo xiisa leh. Ka soo qaxay cadaadis iyo dhibaatooyin. Aniguna waxaan barnaamij ka sameeyey la xiriira xusuusteeyda la xiriirta qaxii aan soo maray, hase yeeshee aan jeclaan lahaa inaan dhageeysto xusuuso kale ee qaxa la xiriira. Dad badan ayaa xusuustan ila qaba. Waa qeeybo ka mid ah taariikhda Iswiidhishka ee iminkadan.
Dokumentaarkii ayaa haddaba noqdey qorshe uu ruux walbaa ka qeeyb qaadan karo, isla-markaana uu la qeeyb-san karo bulshada inteeda kale waayo-arag-nimada uu middaa u leeyahay ama reerkiisu u leeyahay iyo weliba ciddii aan waayo-arag-nimo la mid ah soo marin:
- Waa arrin macne ku fadhiya in xusuusta la qeeybsado iyo in la adkeeyo xusuustaa. Sidoo kale dadyoowga aan qaxa soo marin sidii ey ku fahmi lahaayeen….Waxaan ahaa afar jir kolkii aan qaxa soo galay, welina waa mid ila socda maalin walba nolosheeyda sidii harkeeyga oo kale. Tallaabo walba, go'aan walba oo aan gaaro fikirkeeyga ayuu qaxu ku dheehan yahay, sida ay sheegtay Sîlan.
Barnaamijka dokumentaarka ee "Min flykt - qaxaygii" ayaa ka bixi doona laanta idaacadda P1 17-ka bishan noveembar oo eynu ku jirno saacaddu kolka ay tahay 15:03 (saddexda iyo saddex daqiiqo). Hase yeeshee looga dhageey-san karaa "Pod" ahaan laga bilaabo maanta oo bishu tahay 15-ka noveembar cinwaanka www.sverigesradio.se iyo sidoo kale app-ka Sveriges .